WordPress la jabsaday? Toban Talaabo oo Lagu Dayactirayo Blog-kaaga | Martech Zone
Tuesday, April 27, 2010 Arbacada, Nofeembar 5, 2014 Douglas Karr
Saaxiibkeyga wanaagsan ayaa dhawaan jabsaday Blog-kiisa WordPress. Waxay ahayd weerar xaasidnimo ah oo saameyn ku yeelan kara qiimeyntiisa raadinta iyo, dabcan, xawaareyntiisa taraafikada. Waa mid ka mid ah sababaha aan ugula taliyo shirkadaha waaweyn inay u adeegsadaan barxadda wax lagu qoro shirkadaha sida Isku-darka - halka ay jirto koox dabagal ah oo adiga ku raadineysa. (Shaacinta: Anigu waxaan ahay saamile)
Shirkaduhu ma fahmin sababta ay lacag ugu bixin doonaan barxad sida Compendium… ah illaa ay ii shaqaaleeyaan si aan habeenka oo dhan uga shaqeeyo dayactirka free Blog-ga WordPress! (FYI: WordPress sidoo kale waxay bixisaa a Nooca VIP iyo Typepad sidoo kale waxay bixiyaan a nooca ganacsiga. )
Kuwa idinka mid ah ee aan awoodi karin barxad baraha internetka oo ay ku bixiyaan adeegyada ay bixiyaan, waa kuwan taladayda waxa la sameeyo haddii WordPress la jabsado:
Is deji! Ha bilaabin inaad wax tirtirto oo aad rakibto dhammaan noocyada kala duwanaanta ah ee ballan qaadaya inay nadiifinayaan rakibiddaada Ma garanaysid cidda qortay iyo haddii ay si fudud ku kordhinayso waxyeello xunxun bogagaaga. Si qoto dheer u neefso, fiiri qoraalkan blog, iyo tartiib ah oo ula kac ah hoos ugu dhaadhac liiska hubinta.
Hoos u dhig baloogga. Isla markiiba. Habka ugu fudud ee tan loogu sameyn karo WordPress waa magacaabi faylkaaga index.php ee galkaaga xididka. Kuma filna in kaliya la dhigo bogga index.html… waxaad u baahan tahay inaad joojiso taraafikada dhammaan bogagga boggaaga. Ku meelaynta boggaaga index.php, soo gal feyl qoraal ah oo sheegaya in aad khadadka ka baxsan tahay dayactirka isla markaana aad soo noqon doonto dhawaan Sababta aad ugu baahan tahay inaad hoos u dhigto balooggu waa sababta oo ah inta badan jabsadahan gacanta laguma sameeyo, waxaa lagu sameeyaa qoraallo xaasaasi ah oo isku xiraya feylal kasta oo lagu qori karo rakibiddaada. Qof booqanaya bogga gudaha ee bartaada ayaa dib u hagaajin kara faylasha aad ka shaqeyneyso inaad dayactirto.
Ku keydi bartaada. Kaliya ha keydin faylashaada, sidoo kale ha keydin kaydintaada. Ku keydi meel gaar ah haddii ay dhacdo inaad u baahan tahay inaad tixraacdo qaar ka mid ah faylasha ama macluumaadka.
Ka saar dhammaan mawduucyada. Mawduucyada ayaa ah qaab fudud oo loogu talagalay haakarisku inuu wax ku qoro oo uu galiyo lambarkaaga bartaada. Mawduucyada badankood sidoo kale si liidata ayey uqoreen nashqadeeyayaasha aan fahmin waxyaabaha kuxiran badbaadinta bogaggaaga, koodhkaaga, ama keydkaaga xogta.
Ka qaad dhammaan fiilooyinka. Plugins-ka ayaa ah habka ugu fudud ee hacker uu wax u qoro oo uu u galiyo lambarkaaga balooggaaga. Inta badan fiilooyinka waxaa si liidata u qoraa kuwa wax dhisa ee jabsada kuwaas oo aan fahmin waxyaabaha ku saabsan badbaadinta bogaggaaga, koodhkaaga, ama keydka macluumaadkaaga. Mar haddii hacker uu helo feyl leh albaab, waxay si fudud u howlgeliyaan gurguurta oo ka raadsada bogag kale faylashaas.
Dib u rakib WordPress. Markaan idhaahdo dib-u-dhig WordPress, waxaan ula jeedaa - oo ay ku jiraan mawduucaagu. Ha iloobin wp-config.php, feyl aan dib loo qorin markii aad wax ka dajiso WordPress. In balooggan, waxaan ka helay qoraalka xumaanta ah ee lagu qoray Saldhigga 64 sidaa darteed waxay umuuqatay mid xardhan oo qoraal ah waxaana lagu geliyay cinwaanka bog kasta, oo ay ku jiraan wp-config.php.
Dib u eeg macluumaadkaaga. Waxaad ubaahantahay inaad dib u eegto miiska xulashooyinkaaga iyo miiskaaga fariimaha gaar ahaan - adigoo raadinaya wixii tixraac ah ee dibadeed ama nuxur ah. Haddii aadan waligaa eegin xogtaada kahor, udiyaar garow inaad ka hesho PHPMyAdmin ama maareeye kale oo weyddiiya xog uruurinta guddiga martida loo yahay. Maaha wax lagu farxo - laakiin waa waajib.
Bilowga WordPress oo leh mawduuc asal ah oo aan lahayn rakibitaanno. Haddii waxyaabahaagu muuqdaan oo aadan arkin wax otomaatik ah oo dib ugu laabta bogagga xun, malaha waad hagaagsan tahay. Haddii aad u hesho dib-u-hagaajin deg deg ah bogga xun, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad nadiifiso kaydintaada si aad u hubiso inaad ka shaqeyneyso nuqulkii ugu dambeeyay ee bogga. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku dhex marto diiwaankaaga diiwaanka diiwaanka si aad isugu daydo inaad hesho wax kasta oo ka mid ah waxyaabaha halkaa ku jira ee wadada u xaaraya bartaada. Fursadda in keydka macluumaadkaagu uu nadiif yahay ... laakiin weligaa ma ogaan doontid!
Ku rakib Mawduucaaga. Haddii koodhka xaasidnimada ah la soo celiyo, waxaad u maleyneysaa inaad leedahay mawduuc cudurka qaba. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad saf toos ah ugu socoto mawduucaaga si aad u hubiso inaysan jirin koodh xaasidnimo leh. Waxaa laga yaabaa inaad ka fiicantahay inaad bilowdo bilow cusub. Fur barta ilaa boostada oo fiiri haddii aad weli cudurka qabtid.
Ku rakib Qalabkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad adeegsato qalab, marka hore, sida Xullo Nadiifi marka hore, si aad uga saarto wixii ikhtiyaarro dheeraad ah ee ku jira fiilooyinka aadan mar dambe isticmaaleyn ama aadan rabin. Ha waalin inkasta oo, qalabkani ma ahan midka ugu fiican… badanaa wuu soo bandhigayaa wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad tirtirto goobaha aad rabto inaad ku xirnaato. Ka soo dejiso dhammaan qalabkaaga WordPress. Orod markale bartaada!
Hadaad aragto inay arintu soo laabaneyso, fursadaha ayaa ah inaad dib u soo cusbooneysiisay plugin ama mawduuc nugul. Haddii arrintu aysan waligeed ka bixin, waxaad u badan tahay inaad isku dayday inaad dhowr waddo marin ku xalliso dhibaatooyinka arrimahan. Ha marin waddo.
Burcaddaani waa dad xun! Ma fahmi karno shey kasta iyo feylasha mowduuc oo dhan na wada gelinaya qatar, markaa feejignow. Ku rakib fiilooyin leh qiimeyn weyn, rakibid fara badan, iyo rikoodh weyn oo soo dejin ah. Akhriso faallooyinka ay dadku la xiriireen iyaga.
Tags: hagaaji wordpressjabsadaydayactir wordpresswordpress la jabsaday
Apr 27, 2010 at 1: 29 PM
Waad ku mahadsantahay talooyinka aad halkan ku xustay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo bal haddii haakarisku kaliya beddelo lambarka sirta ah ee bartaada. Xitaa kuma xirmi kartid galka wordpress adoo adeegsanaya FTP.
Apr 27, 2010 at 8: 21 PM
Hore ayaan tan oo kale u soo maray. Habka ugu fudud ee wax looga qaban karo ayaa ah in la furo keydka macluumaadka oo wax laga beddelo cinwaanka emaylka maamulkaaga. Bedel cinwaanka emaylka dib ugu soo celi cinwaankaaga ka dibna samee dib-u-dejin sir ah. Dib-u-dejinta maamulka ayaa markaa loo diri doonaa cinwaanka emaylkaaga halkii loo diri lahaa khawaarijta - ka dibna waad iska xiri kartaa si wanaagsan.
Apr 27, 2010 at 9: 52 PM
Waxyaabo wanaagsan. Tani waxay dhowaan ku dhacday saaxiibkay. Wuxuu isticmaali lahaa taladaada.
Apr 28, 2010 at 8: 48 AM
Doug, miyaad ku dhacday inaad ogaato nooca plugin loo isticmaalay inuu ku jabiyo?
Hadda waxaan helay balooggaaga anigoo raadinaya si aan u xaliyo arrinteyda jabsiga boggeyga. Boggeyga - http://www.namaskarkolkata.com. si lama filaan ah subaxnimadii maanta waxaan ogaaday goobteyda Falastiin Hackers - !! HacKed By T3eS !! . fadlan ma fiirin kartaa - sida aan u hagaajin karo. Waxay bedeleen magacayga iyo lambarka sirta ah ee maamulka WordPress sidoo kale intaan isku dayayo inaan ka soo kabsado e-maylkeygu waa - sidoo kale waa tagtay. Waxaan dareemayaa ciirsi la’aan. Fadlan i hanuuni.
Xaqiiqdii waxaa jira hab fudud oo lagula wareegi karo xakamaynta. Isticmaalka barnaamij sida phpMyAdmin oo lagu rakibo inta badan boggaga, waxaad aadi kartaa miiska wp_users oo aad adigu ku beddeli kartaa cinwaanka emaylka ee maamulka. Waqtigaas oo aad ku sameyn karto 'password la halmaamay' shaashadda galitaanka oo aad dib u dejiso lambarka sirta ah.
Ka Shaqeyso Guriga 4Nolosha
Aug 21, 2011 at 1: 27 AM
Hi Doug - waad ku mahadsan tahay hagaajintaan degdega ah… waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka ogaado 2 toddobaad ka hor markii mid ka mid ah barahayga internetka la jabsaday… martigelinta taageerada ayaa ku xigta wax aan faa'iido lahayn waana inaan baabi'iyaa goobta oo dhan oo aan dib u bilaabo! Waad ku mahadsan tahay uma baahni inaan mar kale ku dhaco xanuunkaas boggeygii ugu dambeeyay ee la jabsaday. Wax talo bixin ah oo ku saabsan ilaalinta haakaarka? - mahadnaq, Dee
Aug 22, 2011 at 2: 22 AM
Dee Dee - waxaa jira waxyaabo kale oo plugins ah oo halkaa ka xayiraya wax ka beddelka faylashaaga mawduuca. WordPress Firewall 2 ayaa ka mid ah. Ma cusbooneysiin doono feylka mawduuca adigoon fasax siinin. Waa wax yar oo xanuun ah nin aniga oo kale ah oo had iyo jeer 'tweaking' ah, laakiin waxay u badan tahay inuu yahay qalab weyn oo loogu talagalay qof aan dooneynin inuu halista u galo qof ama qoraal kasta oo halkaa ka dhacaya oo jabsada bartaada!
Sep 19, 2011 at 10: 30 PM
Waa salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay qoraalkaaga. Boggeyga waa la jabsaday, illaa iyo hadda waxa dhacay oo dhan waa inay ku darsadeen isticmaaleyaasha WP waxayna soo dhejiyeen saddex qoraal oo baloog ah. Martigaliyaheyga websaydhku wuxuu u maleynayaa inay ahayd uun "bot" jebinta erayga sirta ah ee WP, laakiin xoogaa waan ka walwalsanahay. Waxaan badalay dhamaan eraygayga sirta ah, waxaan kudarey ilaalinta lambarka sirta ee tifaftiraha .htaccess, waxaan taageeray feylahayga WP, dejimaha mowduucyadeyda iyo keydkeyga oo waxaan galiyay goobta dayactirka- Dhamaan diyaar garowga dib u soo celinta WP iyo dulucdeyda. Weli, tani waa waxyaabo adag oo loogu talagalay cusub. Waan yara wareersanahay sida nadiifinta dib loogu rakibo WP iyo mawduucayga- si aysan faylal duug ah ugu sii jirin serverkayga ftp. Waxaan sidoo kale ku wareeray dib-u-eegista xog-ururinteyda, anigoo eegay miisaskayga oo dhan phpMYadmin- Sideen xitaa ku aqoonsan karaa koodhka xun? dhibaatada ugu badan waxay tahay inaan sii wado dhammaan fiilooyinkeyga iyo WP si joogto ah, usbuuc walba. Waad ku mahadsantahay ka caawinta cadeynta waxaas oo dhan!
Sep 20, 2011 at 12: 19 AM
Waqtiga intiisa badan, waa faylalka ku jira wp-content ee sida caadiga ah la jabsaday. Faylkaaga wp-config.php wuxuu leeyahay aqoonsigaaga iyo galkaaga wp-content wuxuu leeyahay mawduucaaga iyo waxyaabo kale. Waxaan isku dayi lahaa inaan soo dejiyo WordPress cusub oo aan rakibo oo aan wax walba ka koobiyo laakiin buuga wp-content. Markaa waxaad ubaahantahay inaad kadhigto aqoonsiyada feylka cusub ee wp-config.php (Anigu ma isticmaali doono kii hore). Markaa aad ayaan uga taxaddarayaa isla mowduucyada iyo wixii la mid ah… haddii midkood la jabsado, waxay ku faafin karaan dhammaantood arrinta.
Koodhka xaasidnimada ah waxaa caadi ahaan loo guuriyaa feylal kasta wuxuuna adeegsadaa ereyo sida eval ama base64_decode… waxay sirtaan koodhka waxayna u isticmaalaan shaqooyinkaas si ay u caddeeyaan.
Marka boggaagu dhammaado, waxaad sidoo kale rakibi kartaa qalabka wax lagu baaro ee lagu ogaan doono haddii feylasha wax laga beddelo, sida: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
Sep 26, 2011 at 3: 43 PM
Hi Doug! Waxaan u maleynayaa in balooggeyga la jabsaday. Aniga ayaa gacanta ku haya laakiin hadii aan doonayo inaan la wadaago URL url cinwaanka 'LinkedIn' tusmooyinka cinwaanka iibso z displays. (daroogo) mana garanayo waxaan sameeyo ama sida loo saxo. Xaqiiqdii waxaan dareemayaa xoogaa xasilooni la'aan ah hoos u dhigista boggeyga oo dhan… waa wax weyn !!! Maxaa dhacaya haddii aan ku rakibo wordpress cusub cinwaan kale ka dibna aan ku daro mawduuca, tijaabiyo oo aan tijaabiyo plugins ka dibna aan u dhaqaajiyo dhammaan waxyaabaha ku jira oo aan tirtiro galka asalka ah? Tani ma shaqeyn doontaa? my url blog waa hispanic-marketing.com (haddii aad rabto inaad fiiriso) mahadsanid aad u badan !!!
Sep 26, 2011 at 3: 52 PM
Ma arko wax caddeyn ah oo muujinaya in bartaada la jabsaday. Caadi ahaan marka bartaada internetka la jabsado, mawduucaaga ayaa waxyeelloobaya sidaa darteed dib-u-rakibidda WordPress dhab ahaantii waxba kama tareyso.
Feb 7, 2013 markay ahayd 4:16 PM
WordPress VIP wuxuu leeyahay taageerada noocan ah laakiin waxaa loola jeedaa warshadaha waaweyn. Laakiin sidoo kale waxay leeyihiin shey la yiraahdo VaultPress oo aan qaali ahayn oo taageero leh. Ma jiro wax la yiraahdo "WordPress" oo ah tiknoolajiyad taageero. Taladaydu waxay noqon doontaa inaad ku martigeliso bartaada WPEngine - https://martech.zone/wpe - waxay leeyihiin taageero aad u fiican, keyd otomaatig ah, kormeer amni, iwm. Wayna dhakhso badan yihiin! Waxaan nahay xulufad iyo bartayada ayaa martigalinaysa iyaga!
Feb 22, 2014 markay ahayd 7:47 PM
Haye Douglas, waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro liiskaaga oo ah # 11. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dib ugu soo gudbiso websaydhka aaladaha Google Webmaster si ay dib ugu gurguurto oo ay u siiso dhammaan wixii cad. Tani badanaa waxay qaadataa 24 saac oo keliya, taas oo aad uga gaaban sidii hore. Taas oo ay ku qaadatay toddobaad in dib loo gurguuro.